Indlela Yokuthwasiswa Kwezosiko lwaBasotho
Basotho Initiation Rituals
Ukuthwasiswa Kwamadoda kwaBasotho
Ngaphambi kokuba izithunywa zevangeli ziqalise izikole, imfundo yenzeke ngesikhathi sokuqalwa, ukubeka uphawu lokuya ekukhuleni. Izithunywa zevangeli zazingavumi ukuqala, futhi zazingavamile phakathi neminyaka yobukhosi, ngaphandle kweTlokoa ezintabeni. Eminyakeni yamuva nje, kubonakele ukuvuselelwa okukhulu, futhi intsha eningi namuhla iqaliswa.
Kwaphela iminyaka ngaphambi kokuba iqalwe, abafana babheka ukuqala njengengxenye ebalulekile, ejabulisayo yokukhuliselwa kwabo, ngaphandle kwalokho abakwazanga ukuhlanganyela eminye imisebenzi yezenhlalo kanye nezindaba. Imfihlakalo enkulu yazungeza isikole sokuqala, esenzeka endaweni yokulala (mophato) eyakhelwe endaweni eyimfihlo ezintabeni, futhi abafana babengazi ukuthi balindeni.
I-mophato yavulwa ngochungechunge lwemikhosi nemikhosi ehlala izinsuku ezintathu; abazali nabazali baqala ukuqoqa, futhi kwakukhona ukuphuza kakhulu ubhiya, nemikhosi. Cishe phakathi kwamabili, baholwa endaweni lapho kwakuzokwenziwa khona i-mophato. Ekuphumeni kwelanga umfana ngamunye wathathwa endaweni eyodwa, lapho esokwa khona ngamadoda aqeqeshiwe ngokukhethekile, obenamathele kuzo zonke izici zokuqala.
Lapho ukusoka sekuphelile, abafana basala emagodini ukuze baphinde bahlenge. Ngemva kwesikhashana, isitsha esikhulu semithi, esenziwe nge-butterfat egosiwe ehlanganiswe ne-narcotic enamandla eyenziwe ngendwangu yesitshalo se-leshoma, sanikwa ukuphuza, ukubulala ubuhlungu.
I-mophato yakhiwe ngamadoda asebenza ngenqubo yokuqalisa, futhi abaqalayo bahanjiswa kuwo. Ezinyangeni ezintathu ezilandelayo bafundiswa ingoma, umdanso, umlando, kanye nokuziphatha okuhle, okubandakanya ukuziphatha nokuziphatha. Ubumsulwa, ukwethembeka, ukwethembeka, isibindi, ukuthobeka nokuhlonipha abazali, abadala kanye nenhloko bagcizelelwe. Imfundo yobulili ithatha uhlobo lokukhuthaza ukuba ungaphingi.
Ukukhuthazela ngokomzimba kwahlolwa ngokunyuka okukhulu ezintabeni, futhi amandla angokomzwelo ngokuzikhandla ngaso sonke isikhathi ukuze uhlaziye izingoma uphendule imibuzo. Ukulala kwabo kwakungavamile, ngoba babenesikhumba esisodwa kuphela, futhi ukuqala kwakuqhutshwa ebusika, lapho izinga lokushisa livame ukuwela ngaphansi kweqhwa.
Ngosuku lokugcina lokuqalwa, izimbiza zobumba ezazisetshenziselwa ukugcina ukudla zaphahlazeka futhi i-mophato yatshiswa phansi, ukufanekisela ukuguquka kusuka endala kuya entsha. Abaqalayo bawamukelwa yinduna emcimbini omkhulu.
Ukuthwasiswa Kwabafazi kwaBasotho
AmaBasotho Amantombazane aphakathi kuka-15 no-20 aphinde aqaliswa; le nqubo yayingathandeki kunabantwana, kodwa inhloso yayo yayifana: ukwenza umkhosi ozoletha amantombazane amantombazane ezweni elikhulile. Kwakuyinto efiselekayo, nakuba engadingekile, isandulela umshado, njengoba ngezinye izikhathi kwakukholelwa ukuthi kukhuthaza ukuzala.
Kwezinye izimo, uma umfazi ongenawo umndeni engaphelele umyeni wakhe uyomthuma ukuba aqaliswe. Ukuqaliswa kwamanje kunomsebenzi omusha, oqinile, ohlangene nokuzimisela ukusebenzisa imisebenzi yamasiko njengombonakaliso wobungcweti nobuzwe be-Basotho.
Nakuba kulandela amaphethini afanayo nalawo asekudlule, kuye kwashintshwa ukubhekana nezimo zesimanje. Ukuguqulwa okuphawulekayo ukuthi izikole zokuqala zokuqala zihamba isikhathi esifushane kakhulu kunesikhathi esedlule, nakuba ukuhlolwa kokukhuthazela kusekhona njengento eqondile.